Barcelona oo qorshaynaysa soo qaadashada Eden Hazard iyo Philippe Coutinho. | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Barcelona oo qorshaynaysa soo qaadashada Eden Hazard iyo Philippe Coutinho.
Barcelona oo qorshaynaysa soo qaadashada Eden Hazard iyo Philippe Coutinho.
Posted by: radio himilo August 3, 2017
Muqdisho – Kooxda Barcelona ayay wararku sheegayaan in ay isticmaali doonto lacagta ay ka hesho iibka laacibka reer Brazil ee Neymar kaas oo lacag rikoor ah ugu wareegi kara kooxda reer France ee Paris Saint-Germain si ay usoo qaadato xiddigaha Chelsea iyo Liverpool kala matala ee Eden Hazard iyo Philippe Coutinho.
Kooxda Catalan ayaa larajeynayaa in ay lumiso Neymar maalmaha soo socda kadib markii uu PSG la heshiiyay xiddigan iyada oo Barcelona heli doonto adduun lacageed gaaraya £196 milyan oo lacagta Ingiriiska ah una dhiganta €222 oo lacagta Yurub ah.
Hoggaamiyaha Liverpool ee Coutinho ayaa ahaa dooqa koobaad ee suuqa Barcelona muddo dheer, waxayna hadda doonayan in ay badal kaga dhigaan laacibka ay dhalasho wadaagga yihiin ee Neymar.
The Sun ayaa soo jeedisay laacibkii horay diiradda u saarnaa kooxda caasimadda Spain ee Real, Hazard in isagana ay Barcelona damacsan tahay in ay keento Camp Nou, iyada oo Chelsea lagu qancin doono lacag mug culus si ay u fasaxdo xiddigan xawaaraha wanaagsan ee Eden.
Barcelona ayaa horraanba la helay xiisaheeda ku aadan Super Star-kan lagu qiimeeyo £100 milyan.
Kooxda ka dhisan gobalka goonni u goosadka ah ee Barcelona haddii ay hesho xiddigan waxay u muuqan doontaa mid aan tabi doonin garabka baxaya ee Neymar.
Hazard ayaa sanadkii lasoo dhaafay ku lug lahaa 21 gool oo Premier League-ka ah – hal ayuu ka badan yahay Coutinho, kaas oo dhaliyay 13 gool si lamid ahna caawiyay toddoba kale.
Previous: Neville: “Mourinho wuu kula guulaysan doonaa Man Utd Horyaalka.”
Next: Ivan Perisic oo maalmaha soo socda ku biiri kara Manchester United.